Famangiana hafakely... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanangona Ratalata il y a 15 jours
Tonga nitsapa alahelo tao amin'ny vahoaka majinika sy madinika ny mpitondra fanjakana. Henoy angany e
Eny r'izy mianakavy amin'izao vidim-bary midangana tsy mitsaha-miakatra izao dia tonga eto izahay avy ao aminy fitondram-panjakana, tsy oe sanatria tonga hamendrofendro na koa hampitombo ny vidim-bary indray fa kosa tonga mitondra ny teny fampaherezana sy teny fampitrakana ary fanarian-dia ho anareo vahoaka malagasy.
Marina fa efa tsy zakanareo intsony ilay vidim-bary kanefa rehefa miakatra eo ny vary aloha dia mety hisy fidinany amin'izay io fa mba mahareta kely fotsiny aloha ary fantaro fa tsy ny vary ihany akory no mahavoky fa mbola ao ny katsaka sy ny mangahazo .
NY VAHOAKA MANDINIKA:
Eny tompoko misaotra anareo fitondram-panjakana izahay amin'izao be midina atao nareo izao, tsy misy mampanatena ary moa manantena maika misy anareo manao propavandy mialoha ny fotoana tahaka izao, koa enga anie mba ho vary stock iaraha mihinana izy ity na dia laoka samy manana ny azy ary.
Manarak'izany r'izy mianakavy tsy fantatra hono ze hananatsiny na ny maty tsy nofonosina lambamena na ny velona tsy nomem-potsimbary ,ary ra hamono voalavo any an-tsaha aza mivimbina kobay ko maika ve ka oe hamangy anareo toy izao dia tsy hivimbina vatsy tsinjo 1kilao mba tsy hampikorapaka anareo,Manarak'izany
Raha ny rariny sy ny hitsiny ry vahoaka malagasy dia tokony hiara hitaraina aminareo am’ity vidimbary mihoapampana ity izahay kanefa ny fidiram-bola tsy mitovy ka dia hangata-dalana aminareo izahay hiala tsikelikely hisakafo any aminy 5 étoiles ary ny sasany any aminy kintana 5 fa dia mahereza kalongany ianareo amin'ilay vary 1kilao ao fa raha atao sosoa be rano izany mbola afaka zaraina folo.
Dia mbola mamerina ny fisaorana ho anareo ihany izahay tsy vitany efa nijoro nitondra tosika fameno sy task force ianareo fa mbola somary nandatsa sy naneso ihany, koa ilay Andriamanitra tsy handrin'ny hafa anie ho handrinay eto ihany.
Tsy hiakatra, tsy hisondrotra intsony anie ny vidim-bary
Ho tanteraka tokoa anie izany
izy no nandrary
Ny hamisavisana ny ratsy hono hiavian'ny soa
Ny hanongontsongoina ny maty re fatahorana ny handevim-belona a
Samia velon'aina hifanatsafana indray amin'ny faran'ny taona 2021 e
Ratalata Jn Ba sakaiza mpitafatafa aminao no nanangona
Tafatafan-dRatalata : Famangiana hafakely... - il y a 15 jours